I-Wary Barves 'season 2 yenze i-Afterpath ye-Hump Bar ibhomu, umntwana omtsha, umama onxilisayo, umlingane, isithandwa esitsha kunye nokuzama ukudlwengula.
2x1 "Ngaba Uyazi Igama Lami" "(OAD 6/8/08)
I-Credit Credit: Kevin Lynch © 2011 Disney | ABC Television Group
Wonke umntu uyalwela emva kweBhup Bar ibhomu. U-Roland walimala kakhulu kwaye emva kokuchitha iintsuku ezimbalwa esibhedlele, uJoan wamyisa ekhaya.
U-Pamela unetyala kuba wayesazi ukuba uMarilyn wayedinga uncedo kwaye kunokuba amncede, wamnika uMarilyn izixhobo zakhe zemoto. UMarilyn waya kwi-Hump Bar. Umyeni wakhe wabonisa i-grenade waza wathabatha ipini. Abantu abaninzi balimala, abanye bafa.
UDenise uyalimala, kodwa uyaqhubeka esebenza ngenxa yokuba isibhedlele simfutshane kubasebenzi.
URoxy uyasecaleni ngenxa yokuba wayekulindele ukuva kuTrvor. UJoan umxelela ukuba ukubalekela kwabo kulibazisekile kwaye ulungile.
UClaudia Joy uthabatha uAmanda ekolishi apho u-Amanda uthi ulahlekelwa khona. UClaudia Joy uyavuka ebhedini esibhedlele kwaye uyazi ukuba u-Amanda uswelekile.
2x2 "Abahambi Kwilizwe Elinqabileyo" (OAD 6/15/08)
UMichael noCladiadia Joy balwela intlungu. U-Emmalin ubuza ukuba unokuhlala kunye noDenise, kodwa uya ekhaya xa eqonda ukuba akakwazi ukukhala apho.
UClaudia Joy unokonakala kwiPX xa elahleka uEmmalin.
UTrevor uthumela uRoxy kunye nabafana incwadi kunye noFrank babiza uDenise.
U-Chase ufika ekhaya kwaye uthi uyaqonda ukuba u-Pamela uzizwa njani xa ehamba ngenxa yeli xesha, wayeseva imoto yakhe e-Hump Bar kwaye babengenalo uluhlu lwabantu abasweleyo.
UJoan uya kuphelisa ukukhulelwa, kodwa ugqibe ukugcina umntwana.
UBetty uya kudluliselwa esibhedlele saseburhulumenteni, kodwa uRoxy uyamfumana iveki eyongezelelweyo aze athi uBetty uhamba naye.
2x3 "Umthunywa" (OAD 6/22/08)
Ngomncedisi womngcamango kaFinnn, uClaudia Joy uphuma kwaye uxhumane kunye noEmmalin noMichael.
U-Emmalin akanakuziva ekhuselekileyo kwisithuba ngenxa yokuba ibhomu limbethe i-unify Army, njengabantu abaninzi kwiposi. U-Roland uthetha naye ngelixa bedlala ibhasikidi kwaye u-Emmalin uqala ukuziva ngcono kwaye uqala ukuzisa abahlobo ngokuthetha noRoland.
UDenise uyayinyamekela iMac, isiguli esibhedlele esilahlekile imilenze. Bathetha ngesithuthuthu kwaye unqwenela ukuba unobhiya. Uyamxuba esibhedlele aze amnike ipakethi emithandathu. Xa eshiya kwesinye isibhedlele, umshiya isithuthuthu sakhe esitsha.
UBetty uyavuma ukuba isizathu sokuthi akazithandi abantwana kuba wayengenakukwazi ukufumana nayiphi na eyakhe.
2x4 "Ukushiya iNtloko" (OAD 6/29/08)
UMichael uthatha umhlala-phantsi ngenxa yokuba akafuni ukuthumela amajoni ekulwa, kodwa emva kokuthetha noCladia uYoy, uyaziqwalasela.
UBetty ufumana i-inshorensi yakhe kwaye ucela uRoxy ukuba akhe kabusha iBrap Bar.
URoland uzama ukufumana umsebenzi njengomcebisi wesikolo, kodwa akukho zikhundla ezikhoyo. Uqeshwe njengesiNgesi kunye no-GED utitshala.
UJoan akafuni ukuxelela imikhosi yakhe malunga nokukhulelwa kwakhe kuba uyesaba ukuba baya kulahlekelwa intlonelo kuye, kodwa xa ebaxelela, bayamnika i-ovation. Uvele wangena kwi-trimester yesibini.
UTrvor udutshulwa ehlombe aze abize uRoxy ukuba amxelele ukuba uya ekhaya.
UDenise ugibela isithuthuthu ngesiluleko sikagqirha awayesandul 'u-Getty.
2x5 "Ukubuya kweHero" (OAD 7/6/08)
UTrvor uya ekhaya ukuba amkele i hero, kodwa akayiva ukuba yiqhawe. Wadubula loo ndoda ngobunzima kunye neengxakini nokuba nangona loo mfana wayenombhobho, uTvorvor wayengenakunyaniseka xa edubula.
UFrank usenenkxalabo ngoDenise utshintsho ngelixa ehamba kwaye ubeka isithuthuthu sakhe sithengiswe kwi-Intanethi. Balwa, ngoko uDenise uthi uya kuthengisa i-bike. Uthi wenze into ayifunayo.
UDenise ugibela ibhayisikili ukuya kwi-diner kwaye u-Getty ubonisa. Ufumana unxeba lokulimala amaninzi kwaye baya kuhamba, kodwa ibhayisikili yakhe iphelelwe yigesi. Utshela ukuba agxume emva kwakhe kwaye unqabile, kodwa uthi uyazifuna esibhedlele kwaye akhuphe. Esibhedlele, ibhinqa lixhamla ukubona iDenise ephuma emva kwebhayisikili ye-Getty.
I-2x6 "Inqabileyo kuneManzi" (OAD 7/13/08)
Ukutshintshwa kukaJoan kuqalisa umsebenzi, nangona ephela kwi-trimester yakhe yesibini. Akucingi kakhulu ngeConnor, kwaye nangaphantsi xa evala uphawu lwerediyo ka-Pamela. UMichael utshela uConnor ukuba ukuba ufuna ukwenza into enjalo kwakhona ukuyiqhuba ngoJoan.
U-Pamela ufumana umsebenzi wokusebenzela kwisikhululo senomathotholo e-Atlanta, kodwa uguqula.
UDenise uxelela u-Getty ukuba abayi kuba ngabahlobo ngenxa yokuba abantu bathetha, kodwa uphelela ekuhambeni isidlo sakusasa naye emva kokuba uFrank uthi wamvumela ukuba abe ngumongikazi aze amvumele ukuba agcine isithuthuthu. Uyamangaliswa kukuba ubeka ngale ndlela.
UBetty unquma ukunyango lomhlaza eCalifornia aze abe ngumlingane ongenalutho kwi-bar. Unika uRoxy esinye isiqingatha sebha.
2x7 "IsiGqeba esingenanto" (i-OAD 7/20/08)
URoxy uvula kwakhona i-Hump Bar njengeBetty. UClaudia Joy uzama ukuhamba, kodwa akakwazi ukunyamekela ukuhamba. Kamva ungene no-Emmalin.
UJoan usenenkathazo kunye noConnor kwaye uxelele uRoland ukuba akafuni ukugqoka umfaniswano wakhe wokubeleka ngenxa yakhe. Utshela ukuba xa uConnor ephosa endaweni yokugxotha emva, kufuneka athobe aze amnqothule. Emva kokuba uMnumzane uConnor ahambe ekhaya emva kweeyure ezisibhozo, uyaqinisekisa ukuba kukho umsebenzi owongezelelweyo oza kuwugqiba.
U-Emmalin ufuna ukuxhoma kunye noJeremy kodwa uyacaphukisa ukuba ubonakala uyonwabile nangona udadewabo eswelekile.
Xa uJeremy emangalisa uDenise emsebenzini, uhamba naye ngaphandle kokumxelela ukuba abe ngu-Getty.
UJoan noRoland banentombazana.
2x8 "Ukunyaniseka" (OAD 7/27/08)
U-Roland unceda umfundi ongumlingani kwaye uxoshwa ngenxa yokuziphatha okungalunganga kuba wayevaliwe umnyango xa bethetha. Uvuma ukuba ungumlingani, owamgcina ephuma eWest Point, kodwa ubuyela emsebenzini wakhe. URoland noJoan bacele uMichael noCladiadia ukuba babe ngabazali bakaThixo.
U-Chase uthathwa entolongweni kwaye xa ephuma, uxelela u-Pamela ukuba wayesebenza ngokubhaliweyo kwaye wabanjwa ukuze angakhulumi.
URoxy uvutha umshicileli oshaya iTrevor. I-waitress ifayile ifayili yokuphelisa, kodwa uClaudia Joy unceda uRoxy.
UDenise ugweba u-Getty, ngoko umxelela indlela azive ngayo. Uvakalelwa ngendlela efanayo. Emva kokuba balahlekelwe isigulane, u-Getty uyamanga aze abuze emva koko, aphephe.
2x9 "Ukukhupha i-Net" (OAD 8/3/08)
UDenise ubiza egule iintsuku eziliqela ukuphepha u-Getty. UJeremy uvalelwa entolongweni ngenxa yeziyobisi ezitholakale esikhwameni sakhe, kodwa uyayeka emva kokuba umntu ohlala naye evuma ukuba bangabakhe. U-Getty utshela uDenise ukuba akakwazi ukumbamba ukumbona ngale ndlela kwaye ufumana omnye umsebenzi. Ucela ukuba ahlangane naye kwi-diner elinye ixesha lokugqibela. Uthi ewe, kodwa okwangoku, uFrank ubiza. Uthumela itekisi ku-Getty engakwazi ukuyenza. Njengoko eshiya isibhedlele, uyangeniswa emva kwengozi embi.
U-Emmalin uqala ukuthandana nomfana ogama linguQuinn emva kokudibana nabazali bakhe.
I-Roxy ibonisa iklasi ye-Roland yeGED.
UTrevor unikwe uJoan njengomqhubi wakhe.
2x10 "Ukuphindaphinda" (OAD 8/10/08)
UFrank uya ekhaya kwaye uDenise akakho ukudibana naye kuba e-Getty. Ukhawuleza ekhaya. Ngobo busuku xa besenza uthando, uFrank uyazi ukuba uhlukile. Ngomso olandelayo, ubona ukubamba kwakhe nokumanga isandla sikaGetty. Kungekudala emva koko, u-Getty uyafa.
U-Pamela uqala ukuxhoma nomhlobo omtsha, ade afune ukumangalela u-Pamela.
Izaziso ze-Roxy ukuba uTvorvor akaphume kwintswelo ezimbini kwiiveki ngaphambi kokuhlawulwa.
U-Emmalin uxolisa ukuba inkwenkwe yakhe nguye owenza iziyobisi kwijoni kunye nokuthengisa kumaziko aphakamileyo esikolweni. Ujika kuye kumaPhalamende aze afune imoto yakhe, ukufumana iziyobisi ezaneleyo ukuba ziqwalaselwe njengomthengisi.
UConnor uyaqhubeka ukwenza izinto emva komva kaJoan xa ebeka ekhelweni lokulala.
2x11 "Oomama kunye nabafazi" (OAD 8/17/08)
UFrank uyabuza uDenise ukuba kungani egubungela isithuthuthu kwaye uthi ngenxa yokuba wayeqhele ukukhwela kunye no-Getty. Utshela ngaye ngokumanga aze ahambe. Xa ebuya, bavuma ukucebisa umtshato.
Unina kaClaudia Joy uyahla. UClaudia Joy uyafumanisa ukuba uyise, owayecinga ukuba akayi kwenza into ephosakeleyo, wayegembula yonke imali kwaye unina washiya uyise.
UTrvor ubona ugqirha esecaleni kwaye ufumana intlungu eninzi. I-doc ithi ukunciphisa kwi-rehab kunye noTrevor uthi uya.
U-Roland uxelela uRoxy ukuba wahluleka uvavanyo lweGED, kodwa ucinga ukuba unenkinga ngeemvavanyo ezibhaliweyo aze amnike uvavanyo oluvakalayo, oludlula ngokulula.
U-Roland unceda umntwana ozala uyise ekulweni.
UTrvor unceda uRoland ukuhlanganisa isikhalazo.
2x12 "Ukulindeleke kakhulu" (OAD 9/7/08)
Indoda egama linguTim uqala ukubiza uPelisa kwisikhululo kwaye emva koko ufumana iintyatyambo kuye. Xa ebiza isitishi kwakhona uthetha naye emoyeni aze amxelele ukuba angadibanisi kwakhona okanye uya kubiza amapolisa. Uyamyala ukuba asele eBetty aze emva koko angene endlwini yakhe. Amalungu e-MPs acinga ukuba u-paranoid ngenxa yokuba i-Chase ihambe.
UDenise noFrank baya kumcebisi womtshato noDenise uthi ufuna ukuhlukana. UFrank uthi kufuneka axelele uJeremy, kodwa xa efuna ukumxelela, uyabaxelela ukuba uya kuchitha kwiintsuku ezi-3, ngoko awamxeleli.
UClaudia Joy ekugqibeleni ukholelwa ukuba uyise unenkinga xa efunda ukuba wabuza uEmmalin nge $ 10,000 kwiikholeji yakhe.
2x13 "Iindawo ezikhuselekileyo" (OAD 9/14/08)
U-Pamela uhamba naye unika uKatie i rose ukuze anike unina epaki.
U-Roxy uqinisekisa ukukhathazeka kwakhe ngamachiza kaTrevor kuRoland kwaye uxelela uJoan, ochaphazelekayo ngokuphepha kwakhe kunye noTrevor njengomqhubi wakhe. UJoan uphinda wamisa uTrvor kumsebenzi wedesksi kunye noTrevor uyacaphuka ngoRoxy aze ashiye. Uvuka emotweni emva kokubetha umlilo kunye nomthi.
UJoan unesifo sokumisa umzimba kwaye azisa umntwana ngoC-section ekuqaleni. Usana lungamakhilogremu amahlanu kuphela, kodwa ukwenza kakuhle. UJoan akakho ngaphandle kwehlathi.
UDenise noFrank bamthume uJeremy baye e-Iraq baze bathethe ngokuphathelele ukuhlukana kwabo. Bavuma ukuba bangaxeleli uJeremy ade abuyele ekhaya.
UClaudia Joy noMichael banomdla ozama ukudlwengula uClaudia Joy xa uMichael engekho ekhaya.
2x14 "Ukuhlawula" (OAD 9/21/08)
UClaudia Joy uyashukunyiswa emva kokuzama ukudlwengula, kodwa akayi kuvumela nabani na ukumnceda. UDenise ugxininisa kwaye uClaudia Joy ekugqibeleni uyaphula.
UJoan uhlaziya kwaye udibana nentombi yakhe, abo bathiwa nguSara Elizabeth.
U-Roxy uxelela uTvorvor ukuba wayesaba njani kwaye uthi uyadla imoto kwaye akaze athathe iipilisi kwakhona. Kodwa ke, uyabamba ezinye esibhedlele sikaJoan. Xa abafana bexelela uTvorvor ukuba bafuna ukuba njengaye ngaphandle kokuba ekhwele, uxelela uRoxy malunga neepilisi ezibiwe.
U-Pamela ubonisa ukuba indoda ecaleni kwayo eBetty yindoda yakhe yokutshata kwaye uxelela uRoxy ukuba abize amapolisa aze amthobe.
UDenise uhlawula indlu yeholide kunye nabasetyhini bonke bamtyelela apho.
2x15 "Ndiyabonga Ngokundivumela" "(OAD 10/5/08)
UJennifer Connor, umkaKolonel Evan Connor, ufika kwisithuba kwaye uKlaudia Joy uyammema ukuba ajoyine i-FRG. Kwintlanganiso, uJennifer uzama ukuthatha. UJennifer kamva uthetha kakubi ku-Pamela noRoxy malunga noCladiadia Joy baze bahamba emva kwabo baze benze ikhalenda ye-FRG.
UPel Pamela uyavuya xa uChase efika ekhaya aze amxelele ngento ehamba ngayo.
U-Roxy uxinzelelekile xa ejongene neengxaki zikaTrevor, nangona ephucula. Uqala ukuya ezintlanganisweni.
UDenise ufumana itekisi elithetha impazamo enkulu.
Unina kaRoland uza kutyelela kwaye uJoan uyavuya ngoncedo, kodwa uRoland udinwe ngamazwi akhe.
2x16 "Iinguqulelo" (OAD 10/12/08)
Emva kokucwangcisa usuku lokuzalwa lukaLucas, uChase ubizwa ngokuba ngumsebenzi, kodwa uTvorvor uyakwazi ukummisela kwiqela.
UTrevor unenkxalabo yokuba kuya kufuneka ashiye i-Army aze aqalise ukukhangela kwiifama e-Wyoming. URoxy uqala ukuthukuthela, kodwa emva kokuba uthethe noBetty unquma ukuba angaya e-Wyoming. UBetty umxelela ukuba unxweme, kodwa ngokwenene usebhedlele.
UClaudia Joy uqinisekisa uMichael ukuba asebenze noDenise.
UJennifer uyaqhubeka nokuzama ukuqhuba izinto kwi-FRG kwaye ukhuthaza izinto phakathi kukaEmmalin nabazali bakhe. Ukhuthaza u-Emmalin ukuba abone isosha elidala eli-19.
Emva kokukhangela umntwana, uRoland unquma ukuba uya kuhlala ekhaya noSara Elizabeth.
2x17 "Yonke Entsapho" (OAD 10/19/08)
UClaudia Joy uqinisekisa uRoland noJoan ukuba bahambe ngosuku kwaye bahambe noSara Elizabeth kunye nabo. U-Joan unentloni, ngoko ke u-Roland uyalela ukuba ahambe, kodwa xa befika ekhaya, babona ngefestile ukuba uSara Elizabeth ulungile kwaye badla etafilini yabo yepikiniki.
UMarta uza kunye nomyeni wakhe, kwaye xa ngaphezulu kweedola ezingama-300 libiwe kuBetty, uRoxy uyammangalela, kodwa kuvela kuye.
UMac ubuya ukuthetha nabanye abalahlekelwe yimilenze yabo. Ngelixa ephulaphule ukuthetha, uDenise uyayilahla ifowuni evela kuFrank.
UMichael ukhohlisa uClaudia Joy ukuba avumele u-Emmalin umhla we-Logan.
U-Pamela uncedisa eBetty.
2x18 "Ukuhamba, Ukufika" (OAD 10/26/08)
UJoan uyakhala xa ehamba nentombi yakhe emva koko abuyele emsebenzini.
UMarta ulahla uhambo lwakhe. Ukhona kwibharki xa uRoxy efumana iindaba zokuthi uBetty wafa kwaye uMarta uba nomona ngendlela uRoxy ethetha ngayo ngoBetty. Ufuna ukusela, kodwa uTvorvor ukhulume naye ngaphandle kwakhe kwaye uya naye ukuya kwintlanganiso ye-AA. URoxy uyaziqhenya ngaye kwaye umbiza ngokuba ngumama.
UDenise noMac baphuma amaxesha ambalwa baze baphele ekulala. I-Overseas, uFrank uhamba kunye nomfazi osebenza naye.
U-Pamela ufumana ingxaki kunye nabanye abazali xa uKhana ekwabelana ngolwazi lwakhe apho iintsana zivela khona.
UMichael ukhuthazwa aze axele uCladiadia noEmmalin ukuba baya kutsho eBrussels. UEmmalin uchithekile.
2x19 "Iinguqu zokugqibela zemizuzu" (OAD 11/2/08)
UClaudia Joy uxelela abahlobo bakhe ukuba intsapho yakhe iyiswa eBrussels. UClaudia Joy unzima ukupakisha ikamelo lika-Amanda, ngoko uDenise uyamnceda.
Umntakwabo kaBetty uza kwibhar kwaye ufuna ukuthenga isabelo sikaRoxy, kodwa uRoxy uthi akayi kuthengisa. UTvorvor uyamxhoxisa ukuba akhulelwe.
Mac wenza isigqibo sokuba ahlale noDenise, kodwa xa intombi yakhe yangaphambili ibuya, uDenise unokubona ukuba uya kuba naye.
UPelly uxoshwa kwi-redio yakhe emva kokuphazamisa oomama abasebenza.
I-Post Commander entsha yenza iSekela likaSekela likaGarrison kwaye uxelela uYoan ukuba uya kuhanjiswa ngokukhawuleza e-Iraq.
Xa ixesha lokuhamba, uClaudia Joy uya ku-Emmalin, kodwa wayebalekile no-Logan.
Inkcazo yoLwakhiwo loMathuba
Abaculi abaziwayo abaye bahlupheka kakhulu
Ukuphononongwa kwe-Movie of Life Beautiful